Ny lalao ankamantatra Warp Shift, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny lalao ankamantatra Warp Shift, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Miverina indray izahay amin'ny entana hampahafantatra anao momba ny rindranasa iray izay azo alaina maimaimpoana maimaimpoana. Androany isika dia miresaka momba ny Warp Shift, lalao ankamantatra izay mitranga ao anatin'ny tontolo tsy fantatra. Amin'ity lalao ity dia tsy maintsy hametraka ny fitsapana fahaizantsika isika rehefa mamaha ireo olana napetraky ny lalao, ireo olana izay tokony hamahantsika miaraka amina feon-kira tena tsara. Warp Shift dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. Raha ny faharetana dia tsy toetra tsara miavaka ao amintsika dia afaka mampiasa fividianana fampiharana isika hamahana haingana ireo ankamantatra ary hiroso amin'ny manaraka.
Mandritra ny lalao dia tsy maintsy mitarika ny PI kely miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny fetra labyrintinina ny efitrano fahagagana miafina izay voafandrika izy ireo. Eny an-dàlana dia tsy maintsy manova tsara ny manodidina antsika isika mba hahafahan'i Pi miverina mody tsy misy olana. Warp Shift dia mifanaraka amin'ny iOS 8 mandroso, noho izany dia tsy mifanaraka amin'ny iPhone 4, fitaovana izay manana ny kinova iOS farany azonao ny iOS 4,5. Ity rindranasa ity dia manana isa naoty 5 amin'ny kintana XNUMX ary azo antoka fa hahafaly ireo rehetra izay tia ankamantatra.
Warp Shift endri-javatra
Lalao voasambotra izay mandrisika ny saintsika sy ny saintsika.
Ny sary Labyrintinina amin'ny alàlan'ny zavatra tsy maintsy lalovantsika amin'ny fanaovana izay rehetra azo atao mba tsy hahitantsika ny tenantsika mihidy.
Raha te hanamboatra ny lalantsika dia tsy maintsy manova tsikelikely ny tontolo iainantsika.
Mikaroha tontolo tsy mampino 6 misy haavo 15 avy.
Tsotra dia tsotra ny fanaraha-maso, satria tsy mila manidina amin'ny rantsan-tànantsika fotsiny isika eo amin'ny efijery mba hampihetsika ny toetra amam-panahy ary hikasika izay mety hanampy haharesy ny maze.
Warp Shift€ 5,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao ankamantatra Warp Shift, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Kaody iTunes mihodina: ny fanomezana Three Kings tonga lafatra ho an'ny mpampiasa Apple